Madaxweyne Soo Maray Talada Dalka oo Caqabad layimid -
Madaxweyne Soo Maray Talada Dalka oo Caqabad layimid
Madaxweynhii Dowladdii KMG ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa uu Hadda ku sugan yahay Magaalada Muqdisho waxaana la sheegayaa in uu lacag farabadan ka soo qaatay Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Waxaana wararka intaas ku darayaan in shariifka lasoo faray in Sucuudiga uu aad u damaymayo Saldhig Militari in uu kafurto soomaaliya islamarkaana uu Shariif Sheekh Axmed uu ka dhaa dhiciyo madaxweynaha Hadda Talada haya ee Maxamed Cabdulaahi maxamed farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegayaa in ay wada kulmeen oo ay isku khilaafeen talada uu sucuudiga ka keenay shariifka.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi ayaa waxaa la sheegay in uu Shariif Sheekh Axmed uu u sheegay in uu ka tanaasulo una sheego in Madaxweyne farmaajo uu diiday Talada Sucuudiga iyo Imaaraadka ee ah in Sucuudiga Saldhig uu kafurto soomaaliya Gaar ahaan Muqdisho.
Balanta Sucuudiga ayaa waxay ahayd Haddii uu Farmaajo uu diido Talada in Shariif Sheekh Axmed uu Buuq ku furo Dowladda si uu u ogolaado Taladiisa Farmaajo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa la sheegayaa in Hadda uu bilaabay dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo loogu soo Hor jeedo Dowladda soomaaliya Waxaana Hadda laga dareemaya Muqdisho Dhaq Dhaqaaq siyaasadeed.
Related Items:Featured, Madaxweyne Soo Maray Talada Dalka oo Caqabad layimid
Beel ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed oo Shir la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya